बालुवाटरमा खतराको घण्टी! तीन सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई कोरोना –
बालुवाटरमा खतराको घण्टी! तीन सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई कोरोना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तीन जना सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको पोजेटिभ आएको हो । यसैगरी प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । यसरी प्रधानमन्त्रीका ३ सल्लाहकारसहित ४ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था के होला भनेर चासोका रुपमा हेरिएको छ ।उता प्रधानमन्त्री ओलीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनी पुन परिक्षण गरिने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
यसैगरि पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २ हजार १ सय २० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा १२ हजार ९ सय ७८ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार १ सय २० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ८४ हजार ५ सय ७० जना पुगेको छ ।
यसैबीच, उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै आज १ हजार १ सय ७७ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा १ हजार १ जना, भक्तपुरमा ६७ जना र ललितपुरमा १०९ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा शनिबार प्रवक्ता प्रा।डा। जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ४४ जना डिस्चार्ज भएका छन् । संक्रमितमध्ये ७३।६ प्रतिशत निको भएका छन् भने, अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या ६२ हजार ७ सय ४० जना पुगेका छन् ।
संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या शनिबार थप ८ जनासहित ५ सय २८ पुगेको छ । यता विश्वको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हालसम्म विश्वभर ३ करोड ४८ लाख ७० हजार बढी मानिस संक्रमीत भइसकेका छन् भने त्यस मध्ये १० लाख ३३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ । यसैगरि २ करोड ५९ लाख २० हजार बढी निको भएर घर फर्किएका छन् । विश्वसहित नेपालमा पनि कारोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दा उपत्यका झनै जोखिमपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक उपत्यका नभित्रन आग्रह गरेको छ ।
« नेपालमा कोरोनाबाट थप ८ जनाको मृत्यु,मृत्युहुनेको सख्या ५२८ पुग्यो
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका सुरक्षाकर्मी सहित ७६जनामा कोरोना पुष्टि »